चीनको नाकाबन्दीबारे कसले बोल्ने ?
हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बखत आम नेपालीहरुले गत २०७२ मा भूकम्पपश्चात भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्मरण गरे । यसै सन्दर्भमा नाकाबन्दीबारे नेपाली समाज विभक्त मात्र भएन, नाकाबन्दीको पीडा बिर्सिसकेका नेपालीहरुले पुनः त्यो पीडा सम्झे । हाल मात्र होईन, नाकाबन्दी नेपाली समाजले बर्षौंसम्म पनि सम्झिरहनेछ र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दीर्घकालिन असर पारिरहनेछ ।
भारतले केहि महिना लगाएको नाकाबन्दीबारे जसरी नेपालमा बहस हुने गरेको छ, त्यसको तुलनामा चीनले बर्षौंदेखि लगाएको घोषित वा अघोषित नाकाबन्दीबारे भने कसैले पनि आवाजसम्म उठाएको पाईंदैन । भूकम्प अगाडी बढि चाप रहने नेपाल–चीन तातोपानी नाका भूकम्प पश्चात आजसम्म बन्द छ । त्यो नाका खोल्नका लागि आजसम्म सरकारीस्तरबाट खासै जोड दिएर लागेको पाईंदैन ।
चीनले तातोपानी नाका बन्द गर्नुपर्ने खासै ठोस कारण आजका दिनमा देखिँदैन भने अर्कोतिर खोलिएका नाकाहरु पूर्वाधार अभावमा खासै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । हाल खुल्ला रहेको हुम्लाको हिल्सा नाका हवाईजहाजका लागि मात्र सम्भव जस्तो देखिन्छ भने केरुङ नाका पनि अव्यवस्थित सडकका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीका समयमा निकै उत्तेजक ढंगले उठेका चीनसँगको नाकाहरु खोल्ने विषय अस्वभाविक ढंगले सुस्ताएको छ । चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा सरकारको कुन निकायले फ्लोअप गरिरहेको छ, जनता बेखवर छन् ।
नेपाल–चीन जोड्ने नाकाहरु व्यवस्थित नहुँदा नेपाल–चीन व्यापारमा वर्षौंदेखि दैनिकी ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ भने नेपाल हुँदै चीन जाने भारतिय पर्यटकहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । चीनको सहज नाका तातोपानी बन्द हुँदा तिब्बत जाने भारतीय पर्यटकको संख्या एक चौंथाईमा सिमित हुन पुगको छ ।
त्यसैले अब खाली राजनीतिक उत्तेजना फैलाउने हिसाबले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन वा विरोध गर्नेभन्दा पनि नेपाली जनजीवनलाई दैनिक रुपमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको चीनको घोषित वा अघोषित नाकाबन्दीबारे पनि नेपाली समाजमा छलफल चलाउने कि ? परराष्ट मन्त्रालयले यस विषयमा सोच्न कतै ढिलो त भईसकेको छैन ।
इन्धन आयात ‘प्रगति शून्य‘
नेपालको संविधान जारी पश्चात असोज ०७२ देखि ६ महिनासम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीको मार मुख्यत इन्धन क्षेत्रमा देखिएको थियो ।
उपभोक्तहरु प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल किन्न साढे ७ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका थिए । मुलुकभित्र इन्धनको चरम अभाव भएको बेला चीनले १ हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोल अनुदानमा दियो ।
युरो ४ मापदण्डको उक्त इन्धन केरुङ नाकाबाट आयात भयो । ती इन्धन चीनले केरुङसम्म आफ्नै ट्यांकरले ढुवानी गरेको थियो ।
अनुदानको इन्धनबाट उत्साहित बनेका नेपाल सरकार चीनसँग व्यावसायिक इन्धन सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुग्यो । भारतीय एकाधिकार तोड्नका लागि तत्काल चीनसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, तीन वर्ष बित्दा पनि आयात प्रगति शून्य सरह नै छ । सम्झौता पश्चात प्रारम्भिक अध्ययन गरेपनि आयात प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । चिनियाँबाट इन्धन आयातमा अन्योल बढेको छ ।
‘नाकाबन्दी पश्चात आयात सम्बन्धमा व्यापक चर्चा थियो । नेपालका तर्फबाट विभिन्न प्रविधिक टोलीले अध्ययन पनि गरे । तर ती सबै अध्ययनमै सीमित भएको छ । तीन बर्ष बित्दा पनि इन्धन आउने कुनै आशा छैन ।
नाकाबन्दीले आहत भएका नेपाली जनतालाई तत्काल राहत दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन आयातमा सम्झैता हुने बताएका थिए । नाकाबन्दी खुलेको करिब एक महिना पुग्न लागेपनि भारतबाट पर्याप्त इन्धन नआएपछि चीनसँग सम्झैता गर्न आपूर्ति मन्त्रालय जुटेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागितामा भएको सम्झौतामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सम्झैता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आयात गर्नका लागि ‘प्रोटोकल’ बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा भने नेपाली पक्ष नै कमजोर देखिँदै आएको छ । तेल आयातका लागि चाँडै कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता थियो तर बर्षौं बित्दा पनि कार्यप्रगती शून्य नै छ ।